Digital T Shirt Printer Coth Yakatengeswa China Manufacturer
Home > Products > Digital Printer > T shirt Printer > Digital T Shirt Printer Coth Yakatengeswa
Muenzaniso Nha.: RF-A3 T20180629
Iyo DIY inowanzozivikanwa nhasi, isu DIY shati, shangu, kapu, kape, masokisi. uyewo kudya kwaMwari, keke neki inodyiwa. Kana uri kuenda kunotanga bhizinesi kuti uwane mari nokukurumidza, unogona kufunga kuti utenge imwe Low Price Dtg T Shirt Printer . Iyi printer ine zvigadziro zvakawanda zvitsva: kuchena kwekino inow; Kushandura kwakakwana, hapana chikonzero chekushanda chero ipi yekudhinda yakamanikidzwa yekudhinda; Ipikisi huru yepombi, kubva ikozvino zvichibva kumushonga wepombi kupiswa kweinki; Automatic cleaning nozzle kwenguva yakareba yezororo. Vakawanda vatengi vanotenga iyi T Shirt Printer Cloth Printer kudhinda maitiro akanaka t shati, machira, masokisi uye shangu. Yakakwirira kwazvo. Kana uchida, tapota taura neni, ndichakuratidza sampuri dzakadhindwa. Isu takagadzira iyi shanduro kuti iite kuti ive yakanakisisa yemuchena mutsvuku.
1. Zvose zvakajeka, ingoshanda pakombiyuta kuti unyore, hapana chidimbu chekugadzirisa pane bhodhi ye printer. Digital T Shirt Printer Coth Yakatengeswa
3. Mamwe mavara anosanganisira CMYK + WW kuita mavara ose shati yakadhindwa kusanganisira machena, madzimai, matsvuku, machena, machena, nezvimwewo.
Digital T Shirt Printer Kutengeswa
Refinecolor kofi machine mifananidzo Bata Ikozvino
chengetedza kofi kunyora zvinyorwa Bata Ikozvino
coffee printer ripple printer Bata Ikozvino
Itafura yeAV yakasara Los Angeles Bata Ikozvino